အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့် အစိုးရကအားပေးအားမြှောက်ပြုသော အကြမ်းဖက်မှု - ဝီကီပီးဒီးယား
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည် ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိ အကြမ်းဖက်သမားများနှင့် အရန်တပ်ဖွဲ့များအား မဝေးလှသော သမိုင်းကြောင်းတလျောက် မကြာခဏပင် အထောက်အပံ့များပြုခဲ့သည်။ အစိုးရကအားပေးအားမြှောက်ပြုသော အကြမ်းဖက်မှုကို ဖိနှိပ်ရေးနည်းလမ်းအဖြစ် အသုံးပြုခဲ့သော အာဏာရှင်အစိုးရများစွာအတွက်လည်း အထောက်အပံ့များ ပေးခဲ့သည်။
အစိုးရကအားပေးအားမြှောက်ပြုခြင်းမဟုတ်သော အကြမ်းဖက်မှုများအား အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ ထောက်ပံ့မှုမှာ လက်တင်အမေရိက၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့် တောင်အာဖရိကတို့တွင် ထင်ရှားသည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည် ၁၉၈၁ မှ ၁၉၉၁ တိုင်အောင် စစ်လက်နက်များ၊ သင်တန်းများ၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ထောက်ပို့ဆိုင်ရာ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ပံ့ပိုးမှုများ ကို နီကရားဂွါ အစိုးရအား ဖက်ပြိုင်တိုက်ခိုက်ရာတွင် အကြမ်းဖက်ဗျူဟာများသုံးသည့် ကွန်ထရာသူပုန်များထံ ပေးခဲ့သည်။ Orlando Bosch နှင့် Luis Posada Carriles ကဲ့သို့ ကျူးဘန်းပြည်ပြေးများအကြားမှ အကြမ်းဖက်သမားများထံ သင်တန်းများ လက်နက်များ နှင့် ရန်ပုံငွေများကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက အကြိမ်ကြိမ်ပံ့ပိုးပေးခဲ့သည်။
ယင်းကဲ့သို့ပံ့ပိုးမှုများအား ရှင်းချက်ထုတ်ရန်အတွက် အကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးပေးခဲ့သည်။ စစ်အေးကာလအတွင်း ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုထံ ဘက်လိုက်နိုင်ဖွယ်ရှိသည့် နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုများ - ရေပန်းစားသော ဒီမိုကရက်တစ် နှင့် ဆိုရှယ်လစ်လှုပ်ရှားမှုများပါမချန် - ပျက်ပြားစေရန် ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးတိုက်ဖျက်ပွဲ၏ အစိတ်အပိုင်း တရပ်အနေဖြင့်လည်း ယင်းကဲ့သို့ ထောက်ပံ့မှုများကို စုစည်းသည်။ အမေရိကန်ကော်ပိုရေးရှင်းကြီးများ၏ နိုင်ငံရပ်ခြား အကျိုးစီးပွားများအတွက် - အထူးသဖြင့် ယင်းကဲ့သို့အကျိုးစီးပွားများမှာ ဒီမိုကရက်တစ်အစိုးရများ၏ ခြိမ်းခြောက်မှုအောက် ရောက်သည့်အခါမျိုးတွင် - အမြတ်ထွက်မည့်ပတ်ဝန်းကျင်တခုဖြစ်စေရေးအတွက်လည်း အထောက်အပံ့ကို လမ်းခင်းပေးသည်။
၁.၁ ပီယဇာဖွန်တားနား ဗုံးပေါက်ကွဲမှု
၂.၄ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး၏ စီရင်ချက်
၃.၁ Orlando Bosch
၃.၂ Luis Posada Carriles
၄ ကိုလံဘီယန် စင်ပြိုင်လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များ
၄.၂ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များ ညွှန်ကြားလွှာ အမှတ် ၂၀၀-၀၅/၉၁
၄.၃ Los Pepes
၅ ကိုဆိုဗို လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော်
ရှေ့ပြေးအကြိုနှစ်များဆိုသည်မှာ အီတလီနိုင်ငံ၌ ၁၉၆၀ နှောင်းပိုင်းမှ ၁၉၈၀ အစောပိုင်းကာလအထိ ပေါ်ပေါက်ခဲ့သော လူမှု-နိုင်ငံရေးရုတ်ရုတ်သဲသဲကာလဖြစ်သည်။ လက်ဝဲနှင့်လက်ယျာဝါဒီ ၂ ဘက်လုံးမှ စင်ပြိုင်တပ်ဖွဲ့များ လုပ်ဆောင်သည့် အကြမ်းဖက်မှု လှိုင်းလုံး ရိုက်ခတ်ခဲ့သည့် ကာလဖြစ်သည်။ တင်းမာမှုနည်းဗျူဟာ တရပ်အနေဖြင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု က လက်ယာဝါဒီတို့အား ပံ့ပိုးခဲ့သည်။
အီတာလျံစစ်ဘက်ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့၌ ၁၉၇၁ မှ ၁၉၇၅ အထိ အမှုထမ်းခဲ့သော တန်ပြန်ထောက်လှမ်းရေးဌာနခွဲ ကွပ်ကဲရေးမှူး ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Gianadelio Maletti က ဗင်းနစ်မြို့ဒေသတွင်းရှိ သူ့ဘက်သားများမှာ ဂျာမဏီထံမှ စစ်ဘက် ဖောက်ခွဲရေး ပစ္စည်းများ အထောက်အပံ့ရရှိသည့် လက်ယျာဝါဒီအကြမ်းဖက်ဆဲလ်ကို တွေ့ရကြောင်းနှင့် အမေရိကန် ထောက်လှမ်းရေး အဖွဲ့များက ၁၉၇၀ နှစ်များအတွင်း အီတလီ နိုင်ငံတွင်း လက်ယျာယိမ်းအကြမ်းဖက်ဝါဒကို အကွက်ဆင် ကူညီပေးခဲ့သည်ဟု ပြောဆိုသည်။
အီတာလျံတရားသူကြီး Guido Salvini စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး၏ အဆိုအရ တင်းမာမှုနည်းဗျူဟာတွင် ပါဝင်ခဲ့သော ခေတ်သစ် ဖက်ဆစ်ဝါဒီအဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သည့် "La Fenice, Avanguardia nazionale, Ordine nuovo" မှာ “စီအိုင်အေနှင့် ဆက်နွယ်သော အစိုးရယန္တရား” ၏ အစိတ်အပိုင်းများထံမှ လမ်းညွှန်မှုခံ “လျှို့ဝှက်လက်နက်ကိုင်အင်အားစုများ” ၏ “တပ်ဖွဲ့များ” ဖြစ်သည်။
ရှေ့ပြေးအကြိုနှစ်များအတွင်း အီတလီ၌ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများနှင့် စီအိုင်အေ၏ ဆက်နွယ်မှုများမှာ စကားရည်လုငြင်းခုံစရာအကြောင်းကိစ္စဖြစ်သည်။ ယင်းကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆွစ်ဇာလန်နှင့် ဘယ်လ်ဂျီယံတို့က လွှတ်တော်စုံစမ်းရေးများ ပြုခဲ့ကြသည်။
ပီယဇာဖွန်တားနား ဗုံးပေါက်ကွဲမှုသည် မီလန်မြို့၊ ပီယဇာဖွန်တားနား ရှိ Banca Nazionale dell'Agricoltura (နိုင်ငံတော်လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးဘဏ်) ဌာနချုပ်၌ ၁၉၆၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၂ ရက် ညနေ ၄ နာရီ ၃၇ မိနစ်တွင် ဖြစ်ပွားသော အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပြီး လူ ၁၇ ဦးသေဆုံးကာ ၈၈ ဦး ဒဏ်ရာရရှိသည်။ ယင်းညနေခင်းတွင်ပင် ရောမနှင့်မီလန်မြို့တို့၌ ဗုံး ၃ လုံး ထပ်မံပေါက်ကွဲပြီး စနက်တံမဖြုတ်ရသေးသော အခြား ၁ လုံးကိုလည်း တွေ့ရှိသည်။
မီလန်မြို့မှ တရားသူကြီး Guido Salvini က အမေရိကန်ရေတပ်အရာရှိ David Carrett ကို ပီယဇာဖွန်တားနား ဗုံးပေါက်ကွဲမှု နှင့်အစရှိသည်များ၌ ၎င်းပါဝင်မှုအတွက် နိုင်ငံရေးနှင့်စစ်ရေးအရ သူလျှိုပြုမှုဖြင့် ၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင် စွဲချက်တင်ခဲ့သည်။ Salvini က ယူအက်စ်-နေတိုး ထောက်လှမ်းရေးကွန်ယက်ဆိုင်ရာ အီတာလျံအရာထမ်း Sergio Minetto၊ ၆၀ နှင့် ၇၀ ပြည့်နှစ်များ အတွင်း အီတလီနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းတွင် စီအိုင်အေ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးမှူးအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သော "collaboratore di giustizia" Carlo Digilio [it] (အန်ကယ်အော်တို) တို့ကိုလည်း အမှုဖွင့်ခဲ့သည်။ မီလန်မြို့ရှိ အော်ပရေးရှင်းဂလက်ဒီယိုနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် သတင်းအချက်အလက်များကို ရှာဖွေနေသည့် စီအိုင်အေဘက်တော်သား Carlo Rocchi ကို ၁၉၉၅ ခုနှစ်၌ ရှာတွေ့ခဲ့သည်ဟု la Repubblica သတင်းစာက အစီရင်ခံခဲ့သည်။
မဇ္ဈိမပဋိပဒါကျလက်ဝဲဝါဒ သံလွင်မဟာမိတ်အဖွဲ့က ထုတ်ဝေသော ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ် အစီရင်ခံစာတစောင်တွင် “၁၉၆၉ ဒီဇင်ဘာ ပီယဇာဖွန်တားနားဗုံးပေါက်ကွဲမှုနှင့် ၅ နှစ်အကြာ Brescia ရှိ ပီယဇာဒယ်လာလော့ဂ်ဂျီယာ ဗုံးပေါက်ကွဲမှု အပါအဝင် လက်ယျာဝါဒီအကြမ်းဖက်သမားဗုံးဖောက်ခွဲမှုများစွာအကြောင်းကို ယူအက်စ်ထောက်လှမ်းရေးအေးဂျင့်များထံ ကြိုတင် အကြောင်းကြားခဲ့သော်လည်း အီတာလျံတာဝန်ရှိသူများထံ သတိပေးခြင်းသော်လည်းကောင်း တိုက်ခိုက်မှုအားတားဆီးခြင်း သော်လည်းကောင်း မပြုလုပ်ခဲ့” ဟု ပါရှိသည်။ ဂျာနယ်လစ်နှင့် လက်ယာစွန်း Ordine Nuovo (New Order) တော်လှန်ရေး အဖွဲ့၏ တည်ထောင်သူလည်းဖြစ်သည့် Pino Rauti (MSI Fiamma-Tricolore ပါတီ လက်ရှိခေါင်းဆောင်) က ရောမမြို့ရှိ အမေရိကန်သံရုံး စာနယ်ဇင်းအရာရှိ ၁ ဦးထံမှ ပုံမှန်ရန်ပုံငွေရခဲ့သည်ဟုလည်း အဆိုရှိသည်။ “ဗုံးဖောက်ခွဲမှုများမှတဆင့် အတ္တလန်တစ်စက်ဝန်းများက အီတလီအတွက် ရေးဆွဲပေးသော ‘တည်ငြိမ်ရေး’ အစီအမံများ မလည်ပတ်မီကပင် လက်ယာဝါဒီတော်လှန်ရေး၏ ခေါင်းဆောင်များအနက်မှ ၁ ဦးက ရောမမြို့ရှိ အမေရိကန်သံရုံး၏ လစာထောက်မှုတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်”ဟု ယင်းအစီရင်ခံစာက ရေးသားထားသည်။
ဗုံးဖောက်ခွဲမှုကို တားဆီးရန်အတွက် SID စစ်ဘက်ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့က အကြီးတန်းအရာရှိတဦးကို ရောမမြို့မှ မီလန်မြို့သို့ စေလွှတ်ရန်ဖြစ်သော်လည်း လက်ဝဲမင်းမဲ့ဝါဒီများထံ အပြစ်ပုံချရန်အတွက် အခြားအရာရှိတဦးအား စေလွှတ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြောင်း ဂလက်ဒီယို (အီတလီနိုင်ငံရှိ နေတိုးအဖွဲ့၏ ‘နောက်ကွယ်’ အမည်ရ ကွန်မြူနစ်ဆန့်ကျင်ရေးအဖွဲ့) ကို ပူးတွဲတည်ထောင်သူ ခရစ်ယာန်ဒီမိုကရက် Paolo Emilio Taviani က စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများထံ ပြောခဲ့သည်။ ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ် ဩဂုတ်တွင် ပြုလုပ်သော Il Secolo XIX သတင်းစာ နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းတွင် Taviani က “ပစ္စည်းထောက်ပံ့ခြင်းနှင့် စုံစမ်းစစ်ရေးအား ရှုပ်ထွေးအောင်ပြုခဲ့သူများတွင် စီအိုင်အေအေးဂျင့်များပါဝင်သည်မှာ သေချာကြောင်း” စွပ်စွဲပြောဆိုခဲ့သည်။
“အမေရိကန်တို့၏ အခန်းကဏ္ဍမှာ မသဲကွဲကြောင်း၊ သိရှိသော်လည်းမတားမြစ်ခြင်း နှင့် ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုများ ကျူးလွန်အောင် တိုက်တွန်းပေးခြင်းကြား လမ်းခုလတ်တွင် ရှိကြောင်း” Guido Salvini က ဆိုသည်။
Vincenzo Vinciguerra ၏ အပြောအရ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုမှာ ထိုစဉ်က ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး Mariano Rumor အား နိုင်ငံတော် အရေးပေါ် အခြေအနေ ကြေညာစေရေး တွန်းအားပေးရန် ဖြစ်သည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက နီကရားဂွါအစိုးရအား ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ရာတွင် အကြမ်းဖက်နည်းဗျူဟာများ အသုံးပြုခဲ့ပြီး အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှု ၁၃၀၀ ထက်မနည်း ကျူးလွန်ခဲ့သော ကွန်ထရာသူပုန်များအား ဘဏ္ဍာရေး၊ ထောက်ပို့နှင့် စစ်ဘက် အထောက်အပံ့များကို ၁၉၇၉ မှ ၁၉၉၀ တိုင်အောင် ပံ့ပိုးခဲ့သည်။ ကွန်ထရာတို့ကျူးလွန်သော လူ့အခွင့်အရေး ဖောက်ဖျက်မှုများအား အကျယ်တဝင့်သိရှိသော်လည်း ဤအထောက်အပံ့ကို ပေးမြဲတိုင်း ပေးနေခဲ့သည်။
နီကရားဂွါနိုင်ငံတွင် Sandinista အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး (FSLN) က ၁၉၇၉ တွင် Anastasio Somoza Debayle ၏ အာဏာရှင်အစိုးရအား ဖြုတ်ချပြီး တော်လှန်ရေးအစိုးရအား ထူထောင်ခဲ့သည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုထံမှ စစ်ဘက်နှင့် ဘဏ္ဍာရေးအထောက်အပံ့များကို Somoza မင်းဆက်က ၁၉၃၆ ခုနှစ်ကတည်းက ရရှိနေခဲ့သည်။ အာဏာလက်ဝယ်ရရှိပြီး သည့်နောက် Sandinistas တို့က အစပထမပိုင်း၌ နိုင်ငံတော်ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးစစ်အစိုးရ၏ အစိတ်အပိုင်းတရပ် အနေဖြင့်လည်းကောင်း ၁၉၈၄ ခုနှစ် လွတ်လပ်၍ တရားမျှတသောရွေးကောက်ပွဲများပြီးသည့်နောက် ဒီမိုကရက်တစ်အစိုးရ တရပ်အနေဖြင့်လည်းကောင်း နိုင်ငံကို အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။
The Sandinistas တို့က ကွန်မြူနစ်စီးပွားရေးစနစ်ကို ဖန်တီးရန် မကြိုးစားခဲ့ရုံမျှမက ၎င်းတို့၏မူဝါဒများက ဆိုရှယ် ဒီမိုကရေစီနှင့် ပေါင်းစပ်ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ကို အားပေးသည်။ ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုအပေါ်မှီခိုနေရခြင်းမှ လွတ်မြောက်နိုင်‌ရေးအတွက် အစိုးရက နီကရားဂွါအား ယူအက်စ်၏ တားမြစ်ပိတ်ဆို့မှုကို ဆန့်ကျင်သည့် အနောက်ဥရောပ ထံမှ အကူအညီရရန် ကြိုးပမ်းသည်။ သို့သော် ယူအက်စ်အုပ်ချုပ်ရေးက လက်ဝဲဝါဒီ Sandinista အစိုးရအား ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းမကျသည့်အပြင် ဆိုဗီယက်-ကျူးဘန်း မော်ဒယ် နှောင်ကြိုးတည်း အာဏာရှင်အစိုးရအဖြစ်ရှုမြင်ပြီး ကွန်ထရာများကို လွတ်မြောက်ရေးတပ်သားများအဖြစ် ပုံဖော်ရန် ကြိုးစားသည်။
ဒန်နီယဲလ်အော်ထေးဂါ ဦးဆောင်သော Sandinista အစိုးရက ၁၉၈၄ နီကရားဂွါရွေးကောက်ပွဲများတွင် ပြတ်ပြတ်သားသား အနိုင်ရခဲ့သည်။ Sandinistas တို့ အာဏာရလာမှုအားတုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော သောင်းကျန်းသူအဖွဲ့အမျိုးမျိုး ဖြစ်သည့် ကွန်ထရာကို ကျောထောက်နောက်ခံပြုရန် ယူအက်စ်အစိုးရက ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းအစီအစဉ်ချခဲ့သည်။ နီကရားဂွါစီးပွားရေးဈေးကွက်ပျက်စီးစေရန် နှင့် ရှားပါးသောသယံဇာတများကို လူမှုရေး နှင့် စီးပွားရေး ပရိုဂရမ်များထံ မရောက်ဘဲ စစ်ရေးတွင်သာ မသုံးမဖြစ်သုံးရသည့်အခြေအနေရောက်ရှိစေရေး နည်းလမ်းတရပ်အနေဖြင့် ဖြစ်သည်။
Sandinista အစိုးရအားဆန့်ကျင်သည့် ကွန်ထရာလှုပ်ရှားမှုများအား အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ ပံ့ပိုးမှုမှာ ၁၉၈၁ ဒီဇင်ဘာလတွင် စတင်ခဲ့ပြီး အော်ပရေးရှင်းများ၏ တပ်ဦးတွင် စီအိုင်အေပါဝင်ခဲ့သည်။ အစီအစဉ်ချမှုနှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု ညွှန်ကြားချက်များ နှင့် အထောက်အပံ့များ၊ လက်နက်များ၊ အစားအစာနှင့်အစားအသောက်တို့အား ကွန်ထရာထံ စီအိုင်အေက ပံ့ပိုးခဲ့ပြီး ယင်းကို ဆယ်စုနှစ်တခုကျော်အတွင်း “ရည်မှန်းချက်အကြီးဆုံး” လျှို့ဝှက်အော်ပရေးရှင်းတခုအဖြစ် ဖော်ပြသည်။
စီအိုင်အေက မျှော်လင့်ထားသော ရည်ရွယ်ချက်များအနက်မှ တခုမှာ စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုများအတွက် ယိုးမယ်ဖွဲ့ရာတွင် အသုံးချနိုင်ရေးအတွက် Sandinista အစိုးရထံမှ ပြင်းထန်ကြမ်းကြုတ်သောလက်တုံ့ပြန်မှုဖြစ်သည်။
အစိုးရအား ဆန့်ကျင်သည့် ကွန်ထရာကမ်ပိန်းတွင် မကြာခဏလုပ်ဆောင်သော အကျယ်တဝင့်အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်များ ပါဝင်သည်။ အစိုးရ၏ စီးပွားရေးနှင့်လူမှုရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများမှာ လူကြိုက်များလေရာ ကွန်ထရာက ထိုပရိုဂရမ်တို့ကို နှောင့်ယှက်ရန် ကြိုးစားခဲ့သည်။ ယင်းကမ်ပိန်းတွင် လူထုအပေါ်လွှမ်းမိုးနိုင်မှုကို ပျက်ပြားစေရန်အတွက် Sandinista အစိုးရ တည်ထောင်ထားသော ကျန်းမာရေးဌာနများ နှင့် ဆေးရုံများကို ဖျက်ဆီးခြင်းပါဝင်သည်။ စာတတ်မြောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုမှာ အစိုးရမူဝါဒ၏ အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်လေရာ စာသင်ကျောင်းများလည်း ဖျက်ဆီးခံရသည်။ ပြန်ပေးဆွဲခြင်း၊ သတ်ဖြတ်ခြင်း နှင့် မုဒိမ်းကျင့်ခြင်းတို့ကိုလည်း ကွန်ထရာက အကျယ်တဝင့်လုပ်ဆောင်လေရာ လူထောင်ပေါင်းများစွာ အထူးသဖြင့် အရပ်သားများမှာ အသတ်ခံရခြင်းနှင့် ထို့ထက်ပိုသောအရေအတွက်မှာ “အစပျောက်ခဲ့သည်။”  ပြန်ပေးဆွဲခြင်းနှင့် သတ်ဖြတ်ခြင်းများမှာ လူမှုဖွဲ့စည်းပုံများ ပျက်ပြားစေရန် နှင့် လူထုအပေါ်လွှမ်းမိုးမှု ရရှိရန်နည်းလမ်းတရပ်အနေဖြင့် ရေဂန်အစိုးရက ပုံဖော်သည့် “ကန့်သတ် စစ်ဆင်ရေး” ၏ ရလဒ်ဖြစ်သည်။ အနှောင့်အယှက်ပြုခြင်း၊ အကြမ်းဖက်ခြင်း၊ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခြင်းနှင့် စစ်ဆင်ရေးကဲ့သို့ နယ်မြေခံလှုပ်ရှားမှုများ” ဟူ၍ ကမ္ဘာ့ ကွန်မြူနစ်ဆန့်ကျင်ရေးလိဂ် (WACL) ၏ အငြိမ်းစား စစ်တပ်ဗိုလ်ချုပ် John Singlaub က သတ်မှတ် ထောက်ခံရပ်တည်ပေးခဲ့သည့် “သမားရိုးကျ မဟုတ်သည့် စစ်ဆင်ရေး” ဟုလည်း လူသိများသည်။ အချို့ဖြစ်ရပ်များတွင် မဆင်မခြင်သတ်ဖြတ်ခြင်းနှင့် ဖျက်ဆီးခြင်း များ ကျူးလွန်ခဲ့သည်။ နီကရားဂွါ၏ ကော်ရင်တိုဆိပ်ကမ်းတွင် ရေမြုပ်မိုင်းများ ထောင်ပြီး ရေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း လုပ်ငန်းအား နှောင့်ယှက်ခြင်းဖြင့် စီးပွားရေးအနှောင့်အယှက်ပြုခြင်းကမ်ပိန်းတခုကိုလည်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ကုန်သွယ်ရေး လုံးဝဥဿုံ တားဆီးကန့်သတ်ခြင်း ချမှတ်ခြင်းဖြင့် ရေဂန်အုပ်ချုပ်ရေးက အားပေးခဲ့သည်။
၁၉၈၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ကွန်ထရာတို့အား ဒေါ်လာ ၂၄ သန်း အထောက်အပံ့ပြုရန် ယူအက်စ်ကွန်ဂရက်က အတည်ပြု ခဲ့သည်။ သို့သော် နီကရားဂွါဆိပ်ကမ်းများအား မိုင်းထောင်ရာတွင် စီအိုင်အေပါဝင်မှုကို လူသိရှိကြား ဖြစ်သွားခဲ့သည့်အပြင် ဖက်ဒရယ်အုပ်ချုပ်ရေးဌာနက အပ်နှံသည့် ထောက်လှမ်းရေးနှင့် သုတေသန ဗျူရို၏ အစီရင်ခံစာတွင် နီကရာဂွါအရေး၌ ဆိုဗီယက်တို့ ကြားဝင်စွက်ဖက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ရေဂန်၏ ချဲ့ကားပြောဆိုမှုများ ပါဝင်လာပြီးသည့်နောက်တွင် ရေဂန်အုပ်ချုပ်ရေးအနေဖြင့် ၎င်း၏ ကွန်ထရာမူဝါဒအား ထောက်ခံမှုအများအပြား ဆုံးရှုံးခဲ့သည်။ ၁၉၈၅ ခုနှစ်တွင် တတိယမြောက် ဘိုလန်ပြင်ဆင်ချက်ဖြင့် ကွန်ထရာတို့ထံ ထောက်ပံ့မှုအားလုံးအား ကွန်ဂရက်က ဖြတ်တောက်လိုက်သည်။
အကျိုးဆက်အနေဖြင့် အခြားရင်းမြစ်များမှ ရန်ပုံငွေများပံ့ပိုးပေးရန် ရေဂန်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့က ကြံဆောင်ခဲ့ရတော့သည်။ ၁၉၈၄ နှင့် ၁၉၈၆ ခုနှစ်အကြားတွင် ဒေါ်လာ ၃၄ သန်းကို တတိယနိုင်ငံများ ကြားခံ၍လည်းကောင်း ဒေါ်လာ ၂.၇ သန်းကို ပုဂ္ဂလိကရင်းမြစ်များမှလည်းကောင်း ပေးပို့ခဲ့သည်။ NSC ဝန်ထမ်းများ၏ လျှို့ဝှက်ဌာနတခုဖြစ်ပြီး ကိုယ်ပိုင်လေယာဉ်များ၊ လေယာဉ်မှူးများ၊ လေယာဉ်ကွင်းများ၊ သင်္ဘောများ နှင့် လုပ်သားများရှိသော "အင်တာပရိုက်စ်" အမည်ရ အဖွဲ့အစည်းကို ဖန်တီးခဲ့သည့် အော်လီဗာနော့သ်က ယင်းရန်ပုံငွေများကို အမျိုးသားလုံခြုံရေးကောင်စီထံမှတဆင့် ပေးပို့ခဲ့သည်။ အခြား အစိုးရအေဂျင်စီများ အထူးသဖြင့် ဗဟိုအမေရိကတိုက်ရှိ စီအိုင်အေဝန်ထမ်းများထံမှလည်း အထောက်အပံ့များ ရရှိခဲ့ သည်။ အီရန်ထံလက်နက်ရောင်းချရာမှအမြတ်ရငွေများကို ကွန်ထရာအတွက် ရန်ပုံငွေဖြစ်မြောက်အောင် အသုံးပြုခဲ့သည့် ၁၉၈၆-၁၉၈၇ ခုနှစ် အီရန်-ကွန်ထရာအရေးဖြင့် ဤဆောင်ရွက်ချက်များမှာ အဆုံးသတ်သွားခဲ့သည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု သိထားပြီးဖြစ်သည့် မူးယစ်ဆေးဝါးမှောင်ခိုကူးမှုမှတဆင့်လည်း ကွန်ထရာအတွက် ငွေကြေးစုဆောင်းခဲ့သည်။ ယင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အထက်လွှတ်တော်အမတ်ဂျွန်ကယ်ရီ၏ ၁၉၈၈ ပြည်ပဆက်ဆံရေးများကော်မတီ အစီရင်ခံစာက “မူးယစ်ငွေများ မှာ ကွန်ထရာ ရန်ပုံငွေအခက်အခဲအတွက် ပြီးပြည့်စုံသောအဖြေဖြစ်သည်ဟူသည့် ယူဆချက်ကို အကြီးတန်း မူဝါဒချမှတ်သူများမှာလည်း မလွန်ဆန်နိုင်” ဟူ၍ ကောက်ချက်ချထားသည်။
ကွန်ထရာများအပေါ် လူထုအားပေးထောက်ခံမှုရောက်သွားစေရန် နှင့် ကွန်ဂရက်အတွင်း ထိုထောက်ပံ့မှုအား မျက်နှာသာ ပေးမည့် မဲ အပြောင်းအလဲဖြစ်စေရန် ရေဂန်အစိုးရက ကမ်ပိန်းတခုကို နီကရားဂွါပြည်တွင်းစစ်ပွဲတလျောက် ဆင်နွှဲခဲ့သည်။ ထို့အတွက် အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် ၎င်းတို့အကြား ဆက်နွယ်မှုများကို ထုတ်ဖော်ခြင်းမပြုကြသည့် အခယူအကြံပေးများ ရေးသားသော “ပေါ်တင်ဝါဒဖြန့်ချိရေး” ဟုလည်း သိရှိကြသော ကွန်ထရာများအပေါ်အကောင်းမြင်စေမည့် ရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေမှုများ နှင့် ဖြန့်ချိမှုများအား အမျိုးသားလုံခြုံရေးကောင်စီက ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ အလားတူသတင်းစကားများပေးသည့် မိန့်ခွန်းများနှင့် သတင်းကွန်ဖရင့်များကိုလည်း စီစဉ်ခဲ့သည်။ ကွန်ထရာများအကြောင်းကို နှစ်လိုဖွယ်ရာအသုံးအနှုန်းများ သုံးစွဲပြီး ယူအက်စ်အစိုးရက ဆက်တိုက်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး “ကိုယ်ကျင့်တရားအရ [အမေရိကန်] နိုင်ငံ့ဖခင်ကြီးများအလား” ဟု ရေဂန်က ကွန်ထရာတို့ကို တင်စားခဲ့သည်။ အုပ်ချုပ်ရေးက ဆက်ဖြန့်ချိနေသည့် အခြားခေါင်းစဉ်မှာ နီကရားဂွါနိုင်ငံအား ဒီမိုကရေစီ ပြန်လည်ပေးရန်ဟူသည့် အယူအဆဖြစ်သော်လည်း တော်လှန်ရေးမတိုင်မီက နီကရားဂွါမှာ ယူအက်စ်ထောက်ခံသည့် အာဏာရှင်အစိုးရဖြစ်ခြင်းကြောင့်သာမက Sandinistas မတိုင်မီက ဒီမိုကရက်တစ်အစိုးရ မည်သည့်အခါကမျှ မဖြစ်ခဲ့ကြောင်း လေ့လာသူများက “ထူးဆန်းစွာ” ဟု သရုပ်ဖော်ခဲ့သည်။ ၁၉၈၄ နီကရားဂွါ ရွေးကောက်ပွဲများမှာ ယေဘုယျအားဖြင့် တရားမျှတသည်ဟု သမိုင်းပညာရှင်များက ကြေညာခဲ့ကြသော်လည်း Sandinistas တို့ကို ဒီမိုကရေစီနည်းမကျဟု တံဆိပ်ကပ်ရန် ဆက်တိုက်ကြိုးပမ်းမှုများ ရှိခဲ့သည်။
နီကရားဂွါအား ရိုးရာလူမှုဖွဲ့စည်းပုံများ ဆက်လက်ရှိနေပြီး ယူအက်စ်၏ “နယ်ချဲ့အရင်းရှင်ဝါဒီ” အတွေးအခေါ်အား ခြိမ်းခြောက်မှုမပြုမည့် ဗဟိုအမေရိကတိုက်နိုင်ငံနီးချင်းများအတိုင်း ပြန်လည်ဖြစ်သွားစေရန်ဖြစ်သည်ဟု မျက်မှောက်ရေးရာ လေ့လာအစီရင်ခံသူများက ဆိုသည်။ အီရန်-ကွန်ထရာအရေးအား စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကြောင့် စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ရေး ဧရာမလေ့ကျင့်မှုဟု ခေါ်သည့် အော်ပ‌ရေးရှင်းတခု ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
လှည့်ဖျားခြင်း၊ ရန်စခြင်းနှင့် အကြမ်းဖက်ခြင်းများမှတဆင့် ကွန်ထရာအရေးအတွက် နီကရားဂွါ၌ နိုင်ငံရေးထောက်ခံမှုကို “လက်နက်ကိုင်ဝါဒဖြန့်ချိရေးအဖွဲ့များ” ဖြင့် မည်သို့တည်ဆောက်နိုင်ကြောင်းကို အဓိက အသားပေးသည့် ပြောက်ကျားစစ်ဆင်ရေး (Operaciones sicológicas en guerra de guerrillas) အတွင်း စိတ်ဓာတ်ရေးရာအော်ပရေးရှင်းများဟု ခေါင်းစဉ်တပ်ထားသော လက်စွဲစာအုပ်ကို စီအိုင်အေက ကွန်ထရာတို့အတွက် ရေးသားပြုစုခဲ့သည်။ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခြင်းများအကြောင်း လက်စွဲစာအုပ်က ဆွေးနွေးထားသည်။ ထိုလက်စွဲမှာ ကွန်ထရာတို့ အသုံးပြုနှင့်ပြီး ဖြစ်သည့် အစွန်းရောက်အကြမ်းဖက်မှုများအား “လျော့ပါးစေရန်” ဖြစ်ကြောင်း စီအိုင်အေက အခိုင်အမာဆိုသည်။
ထိုလက်စွဲကို စီအိုင်အေထံမှတဆင့် ထုတ်ပြန်ခြင်းမှာ ယူအက်စ်အစိုးရနှင့်သမ္မတရေဂန်တို့က သွယ်ဝိုက်၍ ကွန်ထရာအကြမ်းဖက်မှုများကို အားပေးအားမြှောက်ပြုခြင်းဖြစ်ရာ ရေဂန် ကိုယ်တိုင်၏ သမ္မတညွှန်ကြားလွှာကို ဖောက်ဖျက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်ဟု Leslie Cockburn က ရေးသားခဲ့သည်။
ပြောက်ကျားစစ်အတွင်း စိတ်ဓာတ်ရေးရာစစ်ဆင်မှုများ လက်စွဲမှာ နီကရားဂွါသားတို့၏ စိတ်နှလုံးအား အောင်နိုင်ရေး နည်းလမ်းများအဖြစ် အကြမ်းဖက်မှုနည်းဗျူဟာကို အတိအလင်းထောက်ခံထားသည်။ “ဝါဒဖြန့်ချိရေးအကျိုးသက်ရောက်မှုများအတွက် အကြမ်းဖက်မှုများအား ရွေးထုတ်အသုံးပြုခြင်း” နှင့် “ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းနှင့် ပုန်းလျှိူးကွယ်လျှိူး အကြမ်းဖက်မှု” ကဲ့သို့ အခန်းခေါင်းစဉ်များက အဆိုပါအချက်ကို ရှင်းလင်းထင်ရှားစေသည် …ထို့ကြောင့် စီအိုင်အေအပါအဝင် ယူအက်စ်အစိုးရဝန်ထမ်းများအား လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မှုများနှင့် ပတ်သက်မှုမပြုရန် တားမြစ်သည့် ၁၉၈၁ ဒီဇင်ဘာတွင် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သော သမ္မတရေဂန်ကိုယ်တိုင်၏ သမ္မတ ညွှန်ကြားလွှာ ၁၂၃၃၃ ကို အဆိုပါစာအုပ်ငယ်က ချိုးဖောက်ခြင်းဖြစ်သည်။
နီကရားဂွါအစိုးရက အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအား ၁၉၈၄ ခုနှစ်တွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး၌ တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။ ကွန်ထရာတို့အား ယူအက်စ်ကသာ ဖန်တီးစီမံနေခြင်းဖြစ်သည်ဟု နီကရားဂွါက ဖော်ပြခဲ့သည်။ ထိုပြောဆိုချက်မှာ ငြင်းပယ်ခံရသော်လည်း ကွန်ထရာနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအကြား နီးကပ်သောပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုအကြောင်း ငြင်းကွယ်မရသည့် သက်သေအထောက်အထား အများအပြားကို တရားရုံးက တွေ့ရှိရသည်။ ကွန်ထရာတို့အတွက် မရှိမဖြစ်အရေးပါသော ဘဏ္ဍာရေး ထောက်ပံ့မှု၊ သင်တန်းများ၊ လက်နက်များနှင့် အခြားထောက်ပို့ အကူအညီများကို အချိန်ကာလကြာမြင့်စွာ ပံ့ပိုးပေးမှုတွင် ယူအက်စ်၏ အခန်းကဏ္ဍကြီးမားကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။
နီကရားဂွါဆိပ်ကမ်းများ၌ မိုင်းထောင်ခြင်းအား ရပ်တန့်ရန်နှင့် နီကရားဂွါ၏ အချုပ်အခြာအာဏာကို လေးစားရန် ICJ က ၁၉၈၄ ၌ အမိန့်ချမှတ်ခဲ့သည်။ လအနည်းငယ်ကြာပြီးသည့်နောက် ယူအက်စ်က မည်သို့ ငြင်းဆိုစေကာမူ ဤအမှုကို တရားစီရင်ပိုင်ခွင့် ရှိကြောင်း တရားရုံးကဆုံးဖြတ်သည်။ နီကရားဂွါ၌ စင်ပြိုင်တပ်ဖွဲ့လှုပ်ရှားမှုများအား ကူညီခြင်းဖြင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေကို ချိုးဖောက်ခြင်းများအား ယူအက်စ်က အားပေးအားမြှောက်ပြုခဲ့ကြောင်း တရားရုံးကတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ယူအက်စ်၏ စိတ်ဓာတ်ရေးရာစစ်ဆင်ရေးလက်စွဲ ထုတ်ဝေမှု နှင့် ကွန်ထရာတို့ထံ ဖြန့်ချိမှုကိုလည်း တရားရုံးက ရှုံ့ချခဲ့သည်။ လက်စွဲစာအုပ်မှာ အရပ်သားများအား သတ်ဖြတ်ခြင်းနှင့် ပတ်မှတ်ထားသတ်ဖြတ်ခြင်းများအတွက် ကျိုးကြောင်းဆင်ခြေပေးနိုင်ရန် အကြံဉာဏ်များပေးခဲ့သည်။ “လျှို့ဝှက်အကြမ်းဖက်မှု” အသုံးပြုခြင်းအတွက် ဗြောင်ကျသည့် သရုပ်ဖော်မှုများလည်း ပါဝင်သည်။
အစပထမပိုင်းတွင် ICJ ၌ တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်မရှိကြောင်း ငြင်းဆိုခဲ့သော်လည်း ၁၉၈၅ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက တရားရင်ဆိုင်မှုမပြုဘဲ နောက်ဆုတ်သွားသည်။ အဆုံးသတ်၌ တရားရုံးက နီကရားဂွါကို အသာစီးပေးလိုက်ပြီး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေကို ချိုးဖောက်မှုကြောင့် နစ်နာကြေးပေးရန် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအား ချမှတ်လိုက်သည်။ ICJ ၏ စီရင်ချက် အာဏာမတည်နိုင်ရန် ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီတွင် ယူအက်စ်က ဗီတိုအာဏာအသုံးပြုခဲ့ခြင်းကြောင့် နီကရားဂွါနိုင်ငံမှာလည်း နစ်နာကြေး ရယူနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပေ။
၁၉၅၉ ကျူးဘန်းတော်လှန်ရေးပြီးနောက် ကျူးဘန်းပြည်ပေးများစွာကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအစိုးရက အထူးသဖြင့် ဂျော့ချ် အေ့ချ် ဒဘယ်လျူ ဘုရှ်၏ အုပ်ချုပ်ရေးလက်ထက်တွင် အထောက်အပံ့များကို ပေးခဲ့သည်။ ထင်ရှားသူအများစုအနက် ၁၉၇၆ ကျူးဘန်းလေယာဉ်ဗုံးဖောက်ခွဲမှုတွင် အမှုပတ်သက်ခဲ့သော Orlando Bosch နှင့် Luis Posada Carriles တို့ ပါဝင် သည်။ Bosch မှာ အခြား အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ် ၃၀ အတွက်တာဝန်ရှိပြီး Carriles မှာ အေဂျင်စီနှင့် အချိတ်အဆက်ရှိစဉ် အခါက အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်ပေါင်းများစွာကို ကျူးလွန်ခဲ့သော စီအိုင်အေအေးဂျင့်ဟောင်း တဦးဖြစ်သည်။ အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်များတွင် ပါဝင်ခဲ့သော အခြားသူများမှာ ချီလေးသံတမန် Orlando Letelier ကို ၁၉၇၆ တွင် ဝါရှင်တန်မြို့၌ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခဲ့ပြီး ဘုရှ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့က လွှတ်ပေးခဲ့သော ကျူးဘန်းပြည်ပြေး Jose Dionisio Suarez နှင့် Virgilio Paz Romero တို့ဖြစ်ကြသည်။
Bosch မှာ ဟာဗားနားတက္ကသိုလ်တွင် ဖီဒယ်ကက်စထရိုနှင့် ခေတ်ပြိုင်ဖြစ်ပြီး ကျူးဘန်းတော်လှန်ရေးဖြစ်လာမည့် ကျောင်းသားနိုင်ငံရေးကလာပ်စည်းများတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။ သို့သော် ကက်စထရို၏ အာဏာရှင်အစိုးရနှင့် ကတောက်ကတဆဖြစ်လာခဲ့ပြီး ၁၉၆၀ မအောင်မြင်သော ပုန်ကန်မှုတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။ တော်လှန်ရေးထောင်ထခြားနားလှုပ်ရှားမှု (MIRR) ၏ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာခဲ့ပြီး ကက်စထရိုကိုလုပ်ကြံရန် Luis Posada Carriles နှင့်အတူ စီအိုင်အေနှင့် ပူးပေါင်းခဲ့သည်။ ထိုသူတို့အား ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် ကျောထောက်နောက်ခံပေးခဲ့ကြောင်း စီအိုင်အေက နောက်ပိုင်းတွင် အတည်ပြုခဲ့သည်။ “ကက်စထရိုအားဆန့်ကျင်သည့် အကြမ်းဖက်သမားများအတွက် ထီးရိပ်မိုးအဖွဲ့” ဟု အက်ဖ်ဘီအိုင်က သရုပ်ဖော်သော ညီညွတ်သည့်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့များပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေး၏ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ယူအက်စ်ရှေ့နေချုပ်ဟောင်း Dick Thornburgh က “နောင်တရခြင်းအလျဉ်းမရှိသည့်အကြမ်းဖက်သမား” ဟု Bosch ကို ခေါ်သည်။
မိုင်ယာမီတွင် ကမ်းကပ်ထားသော ဟာဗားနားသို့ ထွက်ခွါမည့် ပိုလန်ကုန်တင်သင်္ဘောတစင်းအား စိန်ပြောင်း (bazooka) ဖြင့် ပတ်ခတ်မှု ကြောင့် ၁၉၆၈ တွင် တရားစွဲခံရသည်။ သူ့အား ထောင်ဒဏ် ၁၀ နှစ် ချမှတ်ခံရပြီး ၁၉၇၄ တွင် ခြေချုပ်ဖြင့် ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ သည်။ ချက်ချင်း ခြေချုပ်အား ချိုးဖောက်ပြီးလက်တင်အမေရိကတခွင် လှည့်လည်သွားလာခဲ့သည်။ ကျူးဘန်းသံရုံးအား ဗုံးထောင်မှုဖြင့် ဗင်နီဇွဲလား၌ အဖမ်းခံရသည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့ ပြန်လွှဲပေးရန် ဗင်နီဇွဲလားအစိုးရက ကမ်းလှမ်းသော်လည်း ကမ်းလှမ်းချက် ပယ်ချခံရသည်။ သူ့အားချက်ချင်းလွှတ်ပေးပြီး ချီလီသို့ ပြောင်းရွှေ့လိုက်သည်။ ယူအက်စ်အစိုးရ၏ အဆိုအရ ၂ နှစ်တာအတွင်း ကျူးဘန်းသံရုံးများအား စာပို့ဗုံးခွဲရန်အတွက် နိုင်ငံ ၄ နိုင်ငံတွင် ကြိုးစားခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
ညီညွတ်သည့်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့များပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေး (CORU)အတွင်း ကျူးဘန်းပြည်ပြေးအဖွဲ့များအား ထည့်သွင်း ပေါင်းစပ်ရန် စီအိုင်အေ၏ အားထုတ်မှုတွင် ၎င်းဝင်ရောက် ပူးပေါင်းခဲ့ရာ ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံတွင် Bosch အဆုံးသတ်သွား သည်။ CORU ၏ အော်ပရေးရှင်းများတွင် မအောင်မြင်သည့် အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကျူးဘန်းသံအမတ်အား လုပ်ကြံမှု နှင့် ဂွါတီမာလာစီးတီး၌ မက္ကဆီကန်သံရုံးအား ဗုံးခွဲမှုတို့ပါဝင်သည်။ Posada နှင့်အတူ ၁၉၇၆ စက်တင်ဘာတွင် ဆောင်ရွက်ခဲ့သော Letelier အား လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မှုကို အစီအစဉ်ချရာတွင် စီအိုင်အေအေးဂျင့် တဦးနှင့် တွဲဘက်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ အရပ်သားခရီးသည် ၇၃ ဦးလုံး သေဆုံးခဲ့သည့် ၁၉၇၆ ဗင်နီဇွဲလားမှ ဟာဗားနားသို့ ပျံသန်းသည့်လေယာဉ်ဗုံးခွဲမှုတွင် သူပါဝင်ပတ်သက်နေခဲ့သော်လည်း ရှည်ရှည်လျားလျားအမှုရင်ဆိုင်ပြီးနောက် သူနှင့် Posada မှာ အမှုမှ လွတ်မြောက်ခဲ့သည်။ စီအိုင်အေက အဆိုပါဗုံးခွဲမှုကို ကြိုတင်သိနှင့်နေခဲ့ကြောင်းကို နောက်ပိုင်းထုတ်ပြန်လိုက်သည့် စာရွက်စာတမ်းများက ပြသလျက်ရှိသည်။ မိုင်ယာမီသို့ ပြန်သွားရာ ခြေချုပ် ချိုးဖောက်မှုဖြင့် အဖမ်းခံရသည်။ သူ့အား ပြည်နှင်ရန် တရားစီရင်ရေးဌာနကအကြံပြုတိုက်တွန်းခဲ့သော်လည်း ဘုရှ်က အဆိုပါအကြံပြုချက်ကို ဖယ်ချပြီး အကြမ်းဖက်မှုအား သူက “စွန့်လွှတ်ပါမည့်” အကြောင်း ခံဝန်ဖြင့် အချုပ်အနှောင်မှ လွှတ်ပေးခဲ့သည်။
Luis Posada Carriles[ပြင်ဆင်ရန်]
ပညာရှင်များနှင့် ဂျာနယ်လစ်များက အကြမ်းဖက်သမားဟု သမုတ်ခံရသည့် စီအိုင်အေအေးဂျင့်ဟောင်း Luis Posada Carriles မှာ ကျောင်းသားဘဝက ကက်စထရိုနှင့်အဆက်အသွယ်ရှိဖူးသော်လည်း ၁၉၅၉ တော်လှန်ရေးပြီးသည့်နောက် ကျူးဘားမှ စွန့်ခွါထွက်ပြေးကာ မအောင်မြင်ခဲ့သည့် ဘေးအော့ဖ်ပစ်ဂ်ကျူးကျော်မှုအား ကူညီကမကထပြုခဲ့သည်။ ကျူးကျော်မှုဖြစ်ပြီးနောက် Carriles ကို ယူအက်စ်တပ်မတော် ဖော့တ်ဘန်းနင်းဌာနတွင် အချိန်တခုကြာအောင် လေ့ကျင့်ပေး ခဲ့သည်။ ထို့နောက် သူ့အား ဗင်နီးဇွဲလားသို့ ပြောင်းရွှေ့ပေးခဲ့ရာ Orlando Bosch နှင့် အဆက်အသွယ်ရခဲ့သည်။ Orlando Bosch အပြင် အခြားသူများနှင့်တကွ ကက်စထရိုဆန့်ကျင်ရေး အကြမ်းဖက်အဖွဲ့များ၏ ထီးရိပ်မိုးအဖွဲ့အဖြစ် သရုပ်ဖော်ခံ ရသော ညီညွတ်သည့်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ ညှိနှိုင်းပေါင်းစပ်ရေးကို သူက တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ၁၉၇၆ ခုနှစ်တွင် ကျူးဘားနားလေယာဉ် ၄၅၅ မှာ ပျံသန်းစဉ် ပေါက်ကွဲပြီး ခရီးသည် ၇၈ ဦးလုံး သေဆုံးကြသည်။ Carriles မှာ အကွက်ချ ကြံစည်မှုအတွက် အဖမ်းခံရသော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် ကွင်းလုံးကျွတ်လွတ်သည်။ သူနှင့် အခြား စီအိုင်အေနှင့် ဆက်နွယ်သည့် ကက်စထရိုဆန့်ကျင်ရေး ကျူးဘန်းပြည်ပြေးများ၊ ဗင်နီဇွဲလားလျှို့ဝှက်ရဲတပ်ဖွဲ့DISIP တပ်ဖွဲ့ဝင်များတို့မှာ အမှုတွင် ပါဝင်ပတ်သက်နေကြောင်း သက်သေအထောက်များအရ ပေါ်လွင်သည်။ ထိုတိုက်ခိုက်မှုတွင် ပူးပေါင်းကြံစည်သူ အဖြစ် ယူအက်စ်အစိုးရအား ကျူးဘားနိုင်ငံက စွပ်စွဲသည့်အခါတွင် နိုင်ငံရေးအရှုပ်အထွေးများ လျင်လျင်မြန်မြန် အုံကြွလာ သည်။ အေဂျင်စီက “ကျူးဘားနားလေကြောင်းလိုင်းအား ဗုံးခွဲမည့် ကျူးဘန်းပြည်ပြေး အကြမ်းဖက်အဖွဲ့များ၏ အစီအမံများနှင့်ပတ်သက်၍ ၁၉၇၆ ဇူလိုင်လကပင်လျှင် ခိုင်မာသောကြိုတင်သတင်းရခဲ့” ကြောင်းကို ၂၀၀၅ တွင် ထုတ်ပြန်သော စီအိုင်အေစာရွက်စာတမ်းများက ဖော်ပြနေသည်။ Carriles က ပါဝင်မှု မရှိကြောင်း ငြင်းဆိုသော်လည်း သူ၏ Los caminos del guerrero (သူရဲကောင်းစစ်သည်များ၏ လမ်းကြောင်းများ) စာအုပ်တွင် အဆိုပါဖြစ်ရပ်အကြောင်း အသေးစိတ်အချက်အလက်များစွာကို ဖော်ပြထားသည်။
ဖမ်းဆီးမှုများနှင့် လွတ်မြောက်မှုများစွာကြုံပြီးနောက် Carriles မှာ Oliver North ဆောင်ရွက်နေသော နီကရားဂွါရှိ ကွန်ထရာအကြမ်းဖက်သမားများထံ ပံ့ပိုးပေးနေသည့်အော်ပရေးရှင်းများတွင် ပူးပေါင်းခြင်းဖြင့် ၁၉၈၅ ခုနှစ်တွင် စီအိုင်အေ လောကထံ ပြန်သွားခဲ့သည်။ သူ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်တွင် လေကြောင်းဖြင့်ကြဲချသည့် စစ်ဘက်ရိက္ခာအထောက်အပံ့များပါဝင်ပြီး ယင်းအတွက် လစာများစွာ ရရှိသည်။ အီရန်-ကွန်ထရာအရေးတွင် သူ၏ အခန်းကဏ္ဍပါဝင်ခဲ့ကြောင်း နောက်ပိုင်းတွင် ဝန်ခံခဲ့ သည်။ ကျူးဘားတွင် ၁၉၉၇ ခုနှစ်၌ အတွဲလိုက် အကြမ်းဖက်ဗုံးဖေါက်ခွဲမှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ Carriles ပါဝင်ပတ်သက်သည်။ ကြီးထွားလာသောခရီးသွားလုပ်ငန်းအား ဗုံးဖောက်ခွဲမှုများက ပစ်မှတ်ထားသည်ဟု အဆိုရှိသည်။ သူ၏ ညွှန်ကြားမှု အောက်ရှိ ကြေးစားစစ်သားတဦးတည်းသာ အဆိုပါအမှုအတွက် စွဲချက်တင်ခံရကြောင်း Carriles ကဝန်ခံပြီး အဆိုပါဖြစ်ရပ်ကို သူစီစဉ်ခဲ့သည်ဟူသော (နောက်ပိုင်းတွင် ပြန်ရုပ်သိမ်းခဲ့သည့်) ဝန်ခံထွက်ဆိုချက် တရပ်ကို ပြုခဲ့သည်။ Carriles မှာ အထောက်အပံ့မရရှိတော့သော်လည်း ယူအက်စ်အစိုးရ၏ သည်းငြီးခံမှုမှ အမြတ်ထွက်ခဲ့သည်ဟု လူ့အခွင့်အရေး စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့က ဖော်ပြသည်။ ဖီဒယ်ကက်စထရိုအား လုပ်ကြံရန် ကြိုးပမ်းမှုဖြင့် Carriles မှာ ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်တွင် ပနားမား၌ ဖမ်းဆီး ရုံးတင်ခံရသည်။
၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် Posada ကို နိုင်ငံ့ပိုက်နက်တွင် တရားမဝင်နေထိုင်မှုဖြင့် တက္ကဆက်ပြည်နယ်ရှိ ယူအက်စ်တာဝန်ရှိသူများက ထိန်းသိမ်းထားခဲ့သော်လည်း ၂၀၀၇ မေ ၈ တွင် စွဲဆိုချက်များအား ပလပ်လိုက်သည်။ ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံ၌ နှိပ်စက်ညှင်းပန်းခံရဖွယ်ရှိသောကြောင့် Posada ကို ပြည်နှင်ဒဏ်ပေး၍ မရဟု ယူအက်စ်ပြည်ဝင်ခွင့်တရားသူကြီးက ၂၀၀၅ စက်တင်ဘာ ၂၈ တွင် ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ ထိုနည်းတူ နှိပ်စက်ညှင်းပန်းခံရမည်စိုးသောကြောင့်ဟုဆိုကာ Posada အား ကျူးဘားသို့ ပို့ဆောင်ရန် ယူအက်စ်အစိုးရက ငြင်းဆိုခဲ့သည်။ ၂၀၀၇ ဧပြီလ၌ သူ၏ အာမခံဖြင့် လွတ်မြောက်လာမှုက ကျူးဘား နှင့် ဗင်နီဇွဲလား အစိုးရများထံမှ ဒေါသတကြီးတုံ့ပြန်မှုများ ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။ တရားရင်မဆိုင်ဘဲ ကိုယ်လွတ်ရုန်းပြေးမည့်သူ နှင့် လူ့အသိုက်အဝန်း အတွက် အန္တရာယ်ဖြစ်သည့် “အကြမ်းဖက်ကြံစည်မှုများနှင့် တိုက်ခိုက်မှုများအား ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံထားသည့် ကြိုးကိုင်သူ တဦး” ဖြစ်ခြင်းကြောင့် ဆက်လက်ထောင်သွင်း အကျဉ်းချထားရန် ယူအက်စ်တရားရေးဌာနက တရားရုံးတော်အား တိုက်တွန်းခဲ့သည်။ ၂၀၀၈ စက်တင်ဘာ ၉ တွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Court of Appeals for the Fifth Circuit က စွဲချက်အား ဖယ်ရှားခဲ့သည့် ပြည်နယ်တရားရုံး၏ အမိန့်အား လှန်ပစ်ပြီး ရမန်ပြန်ထုတ်ခဲ့သည်။ အစားထိုးစွဲဆိုချက် တရပ်ကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အကျိုးဆောင်ကိုယ်စားလှယ်ရှေ့နေ က ၂၀၀၉ ဧပြီ ၈ ရက်တွင် ဦးတိုက်လျောက်သည်။ Carriles အား ရုံးတင်စစ်ဆေးမှုမှာ သူ့အား စွဲဆိုချက်မှန်သမျှ နှင့် လွတ်ကင်းကြောင်း ဂျူရီလူကြီးများ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် ၂၀၁၁ ဧပြီ ၈ ရက်နေ့တွင် အဆုံးသတ်သွားသည်။ သူ့အား “ခေတ်ပေါ်သမိုင်းတလျောက် အန္တရာယ်အရှိဆုံး အကြမ်းဖက်သမားများ အနက်မှ တဦး” နှင့် “ကျူးဘန်းပြည်ပြေးအကြမ်းဖက်မှု၏ ခေါင်းကိုင်ဖခင်ကြီး” ဟု Peter Kornbluh က သရုပ်ဖော်ခဲ့သည်။
ကိုလံဘီယန် စင်ပြိုင်လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များ[ပြင်ဆင်ရန်]
ကိုလံဘီယန်ပဋိပက္ခ၏ နှောင်းပိုင်းကာလဝက်အတွင်း လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုအများစုအတွက် ကိုလံဘီယန် စင်ပြိုင် တပ်ဖွဲ့များတွင် တာဝန်ရှိသည်။ ပထမဆုံးသောစင်ပြိုင်လက်နက်ကိုင်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့များကို လက်ဝဲနိုင်ငံရေးသမားများ၊ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားများနှင့် ပြောက်ကျားများကို တိုက်ခိုက်ရန်အတွက် စစ်အေးကာလအတွင်း စေလွှတ်ထားသော ယူအက်စ် စစ်ဘက်အကြံပေးများက စုစည်းခဲ့သည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးများ နှင့် အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများစွာ၏ အဆိုအရ လက်ယာယိမ်းစင်ပြိုင်အုပ်စုများမှာ ကိုလံဘီယာ၌ အဆိုပါနှစ်အတွင်း ဖြစ်ပွားသော နိုင်ငံရေးလူသတ်မှုများ၏ ၇၀ မှ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ တာဝန်ရှိသည်။ စင်ပြိုင်တပ်ဖွဲ့ အကြမ်းဖက်မှုများမှာ လယ်သမားများ၊ သမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်များ၊ ဌာနေတိုင်းရင်းသားများ၊ လူ့အခွင့်အရေးလုပ်သားများ၊ ဆရာများနှင့် လက်ဝဲဝါဒီနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှား တက်ကြွသူများ သို့မဟုတ် ၎င်းတို့အား ထောက်ခံသူများအား အဓိကပစ်မှတ်ထားသည်။
La Violencia. ဖြစ်ပွားစဉ်နှင့်ဖြစ်ပွားပြီးနောက်အတွင်း ဖွဲ့စည်းခဲ့သော လက်နက်ကိုင်ကွန်မြူနစ်အဖွဲ့များ၏ ကိုလံဘီယာကျေးလက်ဒေသတွင်း တိုးပွားလာခြင်းကြောင့် ကိုလံဘီယာ၏ ပြည်တွင်းလုံခြုံရေးအခြေအနေကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရန် သောင်းကျန်းမှုခြေမှုန်းရေးကျွမ်းကျင်သူများ ပါဝင်သည့် “အထူးစစ်တမ်းအဖွဲ့” တဖွဲ့ကို ၁၉၅၉ အောက်တိုဘာ၌ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက စေလွှတ်ခဲ့သည်။ ၃ နှစ်ကြာပြီးနောက် ၁၉၆၂ ဖေဖော်ဝါရီတွင် အထူးစစ်ဆင်ရေးစင်တာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး William P. Yarborough ဦးဆောင်သည့် Fort Braggထိပ်တန်းအဆင့် ယူအက်စ် အထူးစစ်ဆင်ရေးအဖွဲ့ တဖွဲ့က ဒုတိယမြောက်စစ်တမ်းအတွက် ကိုလံဘီယာသို့ သွားရောက်ခဲ့သည်။
ကွန်မြူနစ်များအား နှောင့်ယှက်ရန် နှင့် အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်များ ကျူးလွန်ရန်အတွက် စင်ပြိုင်တပ်ဖွဲ့အင်အားစု တရပ် ဖန်တီး နေရာချထားရန် Joint Chiefs of Staff ထံ ပေးပို့သော သူ၏ အစီရင်ခံစာ လျှို့ဝှက်နောက်ဆက်တွဲစာတစောင်တွင် Yarborough က တိုက်တွန်းအကြံပြုခဲ့သည် -
နောက်ပိုင်းတွင် လိုအပ်လို လိုအပ်ငြား အတိုက်အခံပြုရေးအော်ပရေးရှင်းများဆိုင်ရာ လျှို့ဝှက်သင်တန်းအတွက် အရပ်ဘက် စစ်ဘက်ဝန်ထမ်းများကို ယခုကတည်းကပင် ရွေးချယ်မှုပြုလုပ်နိုင်ရန် နိုင်ငံအဖွဲ့အဆင့် စုစည်းညီညာသည့် ကြိုးပမ်းမှု ပြုလုပ်သင့်ကြောင်း။ ကိုလံဘီယန် ပြည်တွင်း လုံခြုံရေး စနစ် ရှေ့ဆက်ယိုယင်းလာမှုအား အမြတ်ထုတ်နိုင်ရန်အတွက် အရပ်ဘက်နှင့်စစ်ဘက်ဖွဲ့စည်းမှုတရပ် ဖန်တီးရေး ရှေ့ရှုလုပ်ဆောင်သင့်ကြောင်း။ လိုအပ်သည့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးများ အတွက် ဖိအားပေးရန်၊ တန်ပြန်အေးဂျင့် နှင့် တန်ပြန်ဝါဒဖြန့်ချိမှု လုပ်ငန်းရပ်များ လုပ်ဆောင်ရန်၊ သိနှင့်ထားသည့် ကွန်မြူနစ် အားပေးထောက်ခံသူများအပေါ် စင်ပြိုင်စစ်ဆင်ရေး၊ နှောင့်ယှက်မှု နှင့်/သို့မဟုတ် အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်များ လိုအပ်သကဲ့သို့ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန် ဤဖွဲ့စည်းပုံအား အသုံးချသင့်ကြောင်း။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက ကျောထောက် နောက်ခံပြုသင့်ကြောင်း။
၁၉၆၂ ခုနှစ်တွင် သောင်းကျန်းမှုခြေမှုန်းရေးမူဝါဒကို လာဇိုအစီအမံအဖြစ် သွတ်သွင်းခဲ့ပြီး အကြမ်းဖက်နယ်မြေများတွင်း စစ်ဘက်အော်ပရေးရှင်းများသာမက အရပ်ဘက်လှုပ်ရှားမှုပရိုဂရမ်များကိုပါ ဆော်ဩခဲ့သည်။ Yarborough ၏ တိုက်တွန်း အကြံပြုချက်များအားလိုက်နာ၍ ကိုလံဘီယန်စစ်တပ်က “ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေး” တပ်ဖွဲ့များသို့ အရပ်သားများအား ထည့်သွင်းခန့်အပ်ခဲ့ပြီး ယင်းအဖွဲ့များက သောင်းကျန်းမှုခြေမှုန်းရေးကမ်ပိန်းတွင် စစ်တပ်နှင့်အတူတကွ ပါဝင်၍လည်းကောင်း ပြောက်ကျား လှုပ်ရှားမှုသတင်းများ စုစည်းပေးသည့် အရပ်ဘက်ထောက်လှမ်းရေးကွန်ယက်များတွင်လည်းကောင်း ဆောင်ရွက် ခဲ့သည်။ မူဝါဒရေးရာတိုက်တွန်းအကြံပြုချက်များအနက် ကိုလံဘီယန်နှင့် ယူအက်စ်တာဝန်ရှိသူများ၏ အကျိုးစီးပွားများအား ‘ဝင်ရောက်စွက်ဖက်သူ’ စွဲဆိုချက်များမှ အကာအကွယ်ပေးနိုင်ရန် ပြည်တွင်းလုံခြုံရေးအတွက်ပေးအပ်သော အထူးအကူအညီ မှန်သမျှမှာ အနှောင့်အယှက်ကင်း ပြီး သဘာဝအားဖြင့် လျှို့ဝှက်ထားရမည်” ဟူ၍ ပါရှိသည်။ ၁၉၈၀ အစောပိုင်းနှစ်များ ရောက်မှသာလျှင် လာဇိုအစီအမံနှင့် Yarborough ၏ ၁၉၆၂ တိုက်တွန်းအကြံပြုချက်များအား ကိုယ်စားပြုသည့် သောင်းကျန်းမှုခြေမှုန်းရေးဗျူဟာနှင့် ကင်းကင်းနေရန် ကိုလံဘီယာအစိုးရက ကြိုးပမ်းခဲ့သည်။
လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များ ညွှန်ကြားလွှာ အမှတ် ၂၀၀-၀၅/၉၁[ပြင်ဆင်ရန်]
“မူးယစ်ဆေးဝါးတန်ပြန်တိုက်ဖျက်ရေး” ကြိုးပမ်းမှုများတွင် ကိုလံဘီယာစစ်တပ်အား ကူညီရန်ဟု အယောင်ပြ၍ ကိုလံဘီယာ စစ်တပ်၏ ဒေသန္တရထောက်လှမ်းရေးကွန်ယက်များစွာကို ပြန်လည်ပုံသွင်းရေး အကြံဉာဏ်များပေးရန်အတွက် ယူအက်စ် သံရုံး စစ်ဘက်ရေးရာအုပ်စု၊ ယူအက်စ် တောင်ပိုင်း ကွပ်ကဲရေး၊ DIA နှင့် စီအိုင်အေ ကိုယ်စားလှယ်များပါဝင်သည့် အဖွဲ့ တဖွဲ့ကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက ၁၉၉၀ တွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ဗြိတိသျှနှင့်အစ္စရေးလ်စစ်ဘက်ထောက်လှမ်းရေးများ ထံမှလည်း အကြံဉာဏ်များ ရယူခဲ့သော်လည်း ကိုလံဘီယာစစ်တပ်က ယူအက်စ်၏အဆိုပြုချက်များကိုသာ အဆုံးသတ်တွင် ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ဤစည်းဝေးပွဲများ၏ ရလဒ်မှာ ၁၉၉၁ မေလတွင် ကိုလံဘီယာကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်သော လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များညွှန်ကြားလွှာ ၂၀၀-၀၅/၉၁ ဖြစ်သည်။ ညွှန်ကြားလွှာကိုယ်နှိုက်ကမူ မူးယစ်ဆေးဝါးများအကြောင်း သော်လည်းကောင်း တန်ပြန်တိုက်ဖျက်ရေးအော်ပရေးရှင်းများအကြောင်းသော်လည်းကောင်း ဖော်ပြထားခြင်းအလျဉ်းမရှိဘဲ သောင်းကျန်းမှုကို တိုက်ခိုက်ရန် လျှို့ဝှက်ထောက်လှမ်းရေးကွန်ယက်များ ဖွဲ့စည်းရေးကိုသာ သီးသန့်အာရုံစိုက်ထားသည်။
ဤထောက်လှမ်းရေးကွန်ယက်များက စစ်ဘက်နှင့် စင်ပြိုင်တပ်ဖွဲ့များအကြား တရားမဝင် လျှို့ဝှက်မိတ်ဖက်ပြုရေးအတွက် လမ်းခင်းပေးခဲ့သည်ဟု လူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့က မှတ်ချက်ချသည်။ ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်များက ဒေသန္တရထောက်လှမ်းရေးကွန်ယက်များစွာအတွင်း ၎င်းတို့အား ပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း ၎င်းတို့၏လှုပ်ရှားမှုများနှင့် ပူးပေါင်းခြင်းအားဖြင့်လည်းကောင်း ကိုလံဘီယာ စစ်တပ်နှင့် စင်ပြိုင်တပ်ဖွဲ့များမှ အရပ်သားအဖွဲ့ဝင်များအကြားမှ အချိတ်အဆက်များကို ခိုင်မာစေခဲ့သည်ဟု HRW က ဆိုသည်။ “ထောက်လှမ်းရေးလုပ်ငန်းအတွက်သာမက လူသတ်မှုများဆောင်ရွက်ရန်အတွက်ပါ စင်ပြိုင်တပ်ဖွဲ့များအပေါ် အမှီပြုသည့် လျှို့ဝှက်ကွန်ယက်” တခုကို ပို၍ကျစ်လျစ်ခိုင်မာသွားစေသည်ဟု HRW က ယုံကြည်သည်။
ဤအနေအထားက ကိုလံဘီယာအစိုးရနှင့်စစ်တပ်အနေဖြင့် စင်ပြိုင်တပ်ဖွဲ့များ၏ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများအတွက် တာဝန်ယူမှုအား ငြင်းဆန်ရန် ဖြစ်နိုင်သွားစေသည်ဟု HRW က ဆိုသည်။ “ယူအက်စ်အရာထမ်းအချို့အနေဖြင့် ကိုလံဘီယာစစ်တပ်၏ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများ မှတ်တမ်း နှင့် စင်ပြိုင်တပ်ဖွဲ့များနှင့် ဖြစ်ပေါ်နေဆဲဆက်နွယ်မှုများကို သိနှင့်ပြီးဖြစ်သော်လည်း အကြံပြုတိုက်တွန်းချက်များ ပေးခဲ့သည်” ယူအက်စ်ဖန်တီးသည့် စစ်ဘက်ထောက်လှမ်းရေး ကွန်ယက်များကြောင့် အကြမ်းဖက်မှုများတိုးလာဖွယ်ရှိသည်ကြောင်း HRW က ဖော်ပြထားသည်။
“စင်ပြိုင်တပ်ဖွဲ့မှန်သမျှမှာ စစ်တပ်နှင့် ရင်းနှီးသော မိတ်ဖက်များဖြစ်သည်ဟု မဆိုသာသော်လည်း” စင်ပြိုင်တပ်ဖွဲ့များနှင့် ကိုလံဘီယာစစ်တပ်အကြားမှ လက်ရှိမိတ်ဖက်ပြုမှုမှာ “ညစ်ပတ်သောစစ်ပွဲကို ကိုလံဘီယာစစ်တပ်က ဆင်နွှဲနိုင်ရန် လည်းကောင်း ကိုလံဘီယာအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်အလွှာက ဘူးခံငြင်းကွယ်နိုင်ရန်လည်းကောင်း အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ နှစ်ပေါင်း များစွာ အကြံဉာဏ်ပေးခြင်း၊ သင်တန်းပေးခြင်း၊ လက်နက်ခဲယမ်းများ နှင့် တရားဝင်နှုတ်ဆိတ်နေမှုများဖြင့် ပံ့ပိုးပေးမှုများ ရှိသည့် ပညာသားပါသော ယန္တရားတခုဖြစ်ကြောင်း” HRW က ဆိုသည်။
တိုးပွားလာသော အကြမ်းဖက်မှု နှင့် "ညစ်ပတ်သောစစ်ပွဲ" နည်းလမ်းများ၏ ဥပမေယျတရပ်အနေဖြင့် Barrancabermeja ရှိ ကိုလံဘီယာ ရေတပ်နှင့် MAS အကြားက မိတ်ဖက်ကို HRW က ကိုးကားဖော်ပြသည်။ MAS နှင့် မိတ်ဖက်ပြုထားသော Barrancabermeja တွင် တပ်စွဲထားသည့် ရေတပ်ထောက်လှမ်းရေးကွန်ယက်က ပြောက်ကျားs များကို ထောက်ခံနေသည်ဟု ယူဆရသူမှန်သမျှကိုသာမက နိုင်ငံရေးအတိုက်အခံများ၊ ဂျာနယ်လစ်များ၊ ကုန်သွယ်ရေးသမဂ္ဂဝင်များ၊ လူ့အခွင့်အရေးလုပ်သားများ အထူးသဖြင့် ၎င်းတို့၏အကြမ်းဖက်နည်းလမ်းများကို စုံစမ်းစစ်ခြင်းဖြစ်စေ ဝေဖန်ခြင်းဖြစ်စေ ပြုလုပ်သူများကိုပါ သုတ်သင်ပစ်ရန် ပန်းတိုင်ချမှတ်ခဲ့သည်။
၁၉၉၂ ခုနှစ်၌ ဇိမ်ခံအကျဉ်းထောင် La Catedral မှ ပါဘလိုအက်စ်ကိုဘာ ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားသည်။ များမကြာမီ Medellín မူးယစ်မှောင်ခိုအဖွဲ့အတွင်းမှ သဘောထားမတိုက်ဆိုင်၍ ခွဲထွက်သော the Calí မူးယစ်မှောင်ခိုကုန်ကူးအဖွဲ့က ပါဘလိုအက်စ်ကိုဘာနှင့် ၎င်း၏တွဲဘက်များကို နောက်ယောင်ခံရန်နှင့် သတ်ဖြတ်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် Perseguidos por Pablo Escobar (“အက်စ်ကိုဘာ၏ သုတ်သင်ခံရသူများ” (ဝါ) Los Pepes) ဟု ခေါ်သော စင်ပြိုင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အသစ် တရပ်ကို ဖန်တီးရန် MAS နှင့်အတူ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ယင်းအဖွဲ့၏ ခေါင်းဆောင်မှာ ဖီဒယ်ကတ်စတားညို ဖြစ် သည်။ ကိုကိန်းစီးပွားရေးနယ်ပယ်အတွင်း ၎င်းတို့၏ပင်မပြိုင်ဘက်များကို အပြောင်ရှင်းပစ်ရန် မျှော်လင့်ချက်ဖြင့် လက်နက်များ၊ သတင်းပေးများ နှင့် လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ရေးသမားများအတွက် Calí မူးယစ်မှောင်ခိုအဖွဲ့က ဒေါ်လာ သန်း ၅၀ ပံ့ပိုးပေးခဲ့သည်။ ကိုလံဘီယာနှင့် ယူအက်စ်အစိုးရ ၂ ဘက်လုံးမှ (ဒီအီးအေ၊ စီအိုင်အေ နှင့် ဖက်ဒရယ်အုပ်ချုပ်ရေးဌာန အပါအဝင်) အေဂျင်စီများက Los Pepes အား ထောက်လှမ်းရေးသတင်း ပံ့ပိုးပေးခဲ့သည်။
စီအိုင်အေ၊ ဒီအီးအေနှင့် Los Pepes တို့အကြားမှ ဆက်နွယ်မှု အသေးစိတ်ကို မူဝါဒလေ့လာရေးအင်စတီကျုက ရှာဖွေလျက် ရှိသည်။ စီအိုင်အေအား သတင်းအချက်အလက်လွတ်လပ်ခွင့်အက်ဥပဒေအောက်မှ တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။ ဤအမှု၏ ရလဒ် အနေဖြင့် စီအိုင်အေသာမက ဖက်ဒရယ်အုပ်ချုပ်ရေးဌာန၊ ဒီအီးအေ၊ ကာကွယ်ရေးထောက်လှမ်းရေးအေဂျင်စီနှင့် ယူအက်စ်ကမ်းရိုးတန်းစောင့်တပ်ဖွဲ့ အပါအဝင် အခြားယူအက်စ်အေဂျင်စီများထံမှ စာရွက်စာတမ်းထောင်ပေါင်းများစွာကို လျှို့ဝှက်အဆင့်မှ ပယ်ဖျက်ခဲ့ရသည်။ ဤစာရွက်စာတမ်းများကို "Pepes Project” အမည်ရ ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် အများပြည်သူသိရှိနိုင်အောင် လွှင့်တင်ထားသည်။
ကိုဆိုဗို လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော်[ပြင်ဆင်ရန်]
ဥရောပအစိုးရများစွာက အသိအမှတ်မပြုသော်လည်း FR ယူဂိုစလားဗီးယား တာဝန်ရှိသူများက အယ်လ်ဘေးနီးယန်းလူမျိုး ကိုဆိုဗိုလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် (KLA) ကို အကြမ်းဖက်အဖွဲ့တခုအဖြစ် သတ်မှတ်ထားသည်။ ၁၉၉၈ ဖေဖော်ဝါရီတွင် ယူအက်စ်သမ္မတ ဘီလ်ကလင်တန်၏ ဘော်လ်ကန်ဒေသဆိုင်ရာ အထူးသံ Robert Gelbard ယူဂိုစလားဗီးယားအစိုးရနှင့် KLA ၂ ဘက်စလုံး၏ လုပ်ရပ်များကို ပြစ်တင်ခဲ့ပြီး KLA အား “ဧကန်မုချ အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ တခု” ဟု သမုတ်ခဲ့သည်။ ကုလ ဆုံးဖြတ်ချက် ၁၁၆၀ ကလည်း အလားတူရပ်တည်မှုပြုခဲ့သည်။ အစပထမပိုင်း၌ နေတိုးအဖွဲ့က KLA မှာ “အကြမ်းဖက်မှုကို အဓိကစတင်သူ” နှင့် “ရန်စမှုအတွက် တမင်ကြံရွယ်လှုံ့ဆော်မှုအား လုပ်ဆောင်ခဲ့”သည်ဟု အလေးပေးဖော်ပြသည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု (နှင့် နေတိုးအဖွဲ့) က KLA ကို တိုက်ရိုက်ထောက်ပံ့ခဲ့သည်။ (ရှေ့ယခင်က ဘော့စနီးယန်းစစ်တပ် အား လေ့ကျင့် ပံ့ပိုးပေးသကဲ့သို့ပင်) KLA အား စီအိုင်အေက ရန်ပုံငွေ ပံ့ပိုး လေ့ကျင့် ဖြည့်စည်းခဲ့သည်။ စီအိုင်အေရင်းမြစ်များ က ဆန်းဒေးတိုင်းမ်သတင်းစာထံဖွင့်ချခဲ့ရာတွင် “ယူဂိုစလားဗီးယားအား နေတိုးတပ်ဖွဲ့ ဗုံးမကြဲမီက ကိုဆိုဗိုလွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော်အား ကူညီလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့သည်ဟု အမေရိကန်ထောက်လှမ်းရေးအေးဂျင့်များက ဝန်ခံပြောကြားခဲ့ သည်။” MPRI အတွက် လုပ်ကိုင်ပေးခဲ့သော ယူအက်စ်တပ်ဖွဲ့ဟောင်းက အယ်လ်ဘေးနီးယားတွင် KLA တပ်ဖွဲ့များအား လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့သည်ဟု အငြိမ်းစားကာနယ်တဦးက ၁၉၉၀ တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
ယူဂိုစလားဗီးယား ဘူလ်ဂေးရီးယားနှင့် အယ်လ်ဘေးနီးယား နိုင်ငံဆိုင်ရာ ကနေဒီယန်သံအမတ် James Bissett က “ကိုဆိုဗို၌ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး အခြေခိုင်ရန် နှင့် ကိုဆိုဗိုဒေသ မီးဟုန်းဟုန်းတောက်မှသာ နေတိုးတပ်ဖွဲ့ ကြားဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်လိမ့်မည်ဟူသော မျှော်လင့်ချက်ဖြင့် ….. ၁၉၉၈ ကတည်းက ဗြိတိန်အထူးလေတပ်၏ အကူအညီဖြင့် စီအိုင်အေက ကိုဆိုဗိုလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် အဖွဲ့ဝင်များအား အယ်လ်ဘေးနီးယား၌ လက်နက်တပ်ဆင် သင်တန်းပေးနေခဲ့ကြောင်း” မီဒီယာအစီရင်ခံစာများက ဖော်ပြခဲ့သည်ဟု ၂၀၀၁ တွင်ရေးသားခဲ့သည်။ Tim Judah ၏ အပြောအရ “ရှေ့နှစ်အစောပိုင်းများစွာကတည်းက” ၁၉၉၆ ခုနှစ်ကပင်လျှင် KLA ကိုယ်စားလှယ်များက အမေရိကန်၊ ဗြိတိန် နှင့် ဆွစ် ထောက်လှမ်းရေးအေဂျင်စီများနှင့် တွေ့ဆုံနှင့်ပြီးဖြစ်သည်။
စစ်ပွဲအပြီး၌ KLA က ကိုဆိုဗိုစောင့်ရှောက်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များအဖြစ် အသွင်ကူးပြောင်းခဲ့ပြီး ပြည်နယ် ကင်းလှည့်ရာတွင် နေတိုးတပ်ဖွဲ့များနှင့် အတူတကွလုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ သို့သော် နောက်ပိုင်းနှစ်များအတွင်း အယ်လ်ဘေးနီးယန်းလူမျိုး ပုန်ကန်မှုမှာ (၁၉၉၉-၂၀၀၁) ဆားဘီးယားတောင်ပိုင်းတွင်လည်းကောင်း (၂၀၀၁) မက်ဆီဒိုးနီးယား၌လည်းကောင်း ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။ “အစွန်းရောက်ဝါဒ” နှင့် ဆားဘီးယားတောင်ပိုင်းတွင်လှုပ်ရှားနေသော အုပ်စုများ၏ “တရားမဝင် အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်များ” ဟု EU က ပြစ်တင်လိုက်သည်။ စစ်ပွဲကတည်းကပင်လျှင် KLA ခေါင်းဆောင်အများအပြားမှာ ကိုဆိုဗိုပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်မှုတွင် ပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့ကြပြီး ဖြစ်သည်။
↑ George၊ Alexander (1991)။ "Introduction"။ in George၊ Alexander (ed.)။ Western State Terrorism။ New York: Routledge။ ISBN 978-0415904735။
↑ Blakeley၊ Ruth (December 2006)။ "State Terrorism by Northern Democratic States: Critical fora"Critical" Terrorism Studies"။ British International Studies Association Conference။ Cork, Ireland။
↑ Feldmann, Andreas E. (July 2004). "Reassessing the Causes of Nongovernmental Terrorism in Latin America". Latin American Politics and Society 46 (2): 101–132. doi:10.1111/j.1548-2456.2004.tb00277.x.
↑ Greg Grandin; Gilbert M. Joseph (2010)။ A Century of Revolution: Insurgent and Counterinsurgent Violence during Latin America's Long Cold War။ Durham, North Carolina: Duke University Press။ pp. 397–414။ ISBN 978-0822392859။
↑ Noam Chomsky (1985)။ Turning the Tide: U.S. Intervention in Central America and the Struggle for Peace။ Boston, Massachusetts: South End Press။ p. 60။ ISBN 978-0896082663။
↑ Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italiaesulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi (1995 Parliamentary Commission of Investigation on Terrorism in Italy and on the Causes of the Failing of the Arrests of the Responsibles of the Bombings) (in it) (1995)။ 2006-08-19 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2006-05-02 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Strage di Piazza Fontana – spunta un agente Usa" (in it)၊ La Repubblica၊ February 11, 1998။ 2006-05-02 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ (With links to juridical sentences and Parliamentary Report by the Italian Commission on Terrorism)
↑ (အင်္ဂလိပ်)/(အီတလီ)/(ပြင်သစ်)/ Secret Warfare: Operation Gladio and NATO's Stay-Behind Armies။ Swiss Federal Institute of Technology / International Relation and Security Network။ 2006-04-25 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2006-05-02 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Terrorists 'helped by CIA' to stop rise of left in Italy"၊ The Guardian၊ 26 March 2001။ 28 May 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "1969: Deadly bomb blasts in Italy"၊ BBC News၊ 12 December 1969။ 28 May 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ US 'supported anti-left terror in Italy' Archived 2010-03-29 at the Wayback Machine., The Guardian, June 24, 2000
↑ "Three jailed for 1969 Milan bomb"၊ The Guardian၊2July 2001။ 28 May 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Chomsky၊ Noam (1988)။ The Culture of Terrorism။ Black Rose Books။ pp. 111, 130။ ISBN 9780921689287။
↑ ၁၇.၀ ၁၇.၁ Chomsky၊ Noam (1988)။ The Culture of Terrorism။ Black Rose Books။ pp. 111, 130။ ISBN 9780921689287။
↑ Todd၊ Dave။ "Offensive by Nicaraguan "Freedom Fighters" May be Doomed as Arms, Aid Dry Up"၊ Ottawa Citizen၊ 26 February 1986။ 27 June 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Albert J. Jongman; Alex P. Schmid (1988)။ Political Terrorism: A New Guide To Actors, Authors, Concepts, Data Bases, Theories, And Literature။ Transaction Publishers။ pp. 17–18။ ISBN 978-1-41280-469-1။ 27 May 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Athan G. Theoharis; Richard H. Immerman (2006)။ The Central Intelligence Agency: Security Under Scrutiny။ Greenwood Publishing Group။ p. 216။ ISBN 978-0313332821။
↑ Gary LaFree; Laura Dugan; Erin Miller (2014)။ Putting Terrorism in Context: Lessons from the Global Terrorism Database။ Routledge။ p. 56။ ISBN 978-1134712410။
↑ Gould၊ Jeffrey (2010)။ Grandin, Greg; Joseph, Gilbert M. (eds.)။ On the Road to "El Porvenir"။ Duke University Press။ pp. 87–120။
↑ "On This Day: 1984: Sandinistas claim election victory"၊5November 2005။ 31 May 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Soviet posture in the Western Hemisphere" Archived 2014-11-29 at the Wayback Machine. Carl G. Jacobsen, 28 February 1985, p. 6
↑ Gould၊ Jeffrey (2010)။ "One the Road to "El Porvenir""။ in Gilbert M. Joseph၊ Greg Grandin (ed.)။ A Century of Revolution။ Durham, North Carolina: Duke University Press။ pp. 88–121။
↑ "Ortega collects warm words of support on European trip. Yet his visit is unlikely to drum up much concrete aid" Archived 2015-07-20 at the Wayback Machine. Christian Science Monitor, May 16, 1985
↑ "BBC ON THIS DAY |5| 1984: Sandinistas claim election victory"၊ BBC News၊ 1984-11-05။ 2014-08-18 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Hamilton & Inouye, "Report of the Congressional Committees Investigating the Iran-Contra Affair", p. 3
↑ ၃၉.၀ ၃၉.၁ ၃၉.၂ LaRamee, Polakoff၊ Pierre, Erica (1999)။ Undermining of the Sandinista Revolution။ New York: Palgrave Macmillan။ pp. 141–205။
↑ ၄၀.၀ ၄၀.၁ ၄၀.၂ "A painful purgatory: grief and the Nicaraguan mothers of the disappeared" (1995). Social Science & Medicine 40 (12): 1597–1610. doi:10.1016/0277-9536(94)00346-U.
↑ Chomsky၊ Noam (1985)။ Turning the Tide။ Boston, MA: South End Press။ pp. 24–28။
↑ Truver၊ SC။ "Mines and Underwater IEDs in U.S. Ports and Waterways ..." (PDF)၊ စာ- 4။ 2007-08-21 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 2008-04-28။
↑ International Court of Justice, Case Concerning The Military And Paramilitary Activities In And Against Nicaragua (Nicaragua v. United States Of America)။ March 8, 2007 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ "The New York Times, Oct. 10 Assault On Nicaraguans Is Laid To C.I.A."၊ April 18, 1984။ 2006-11-10 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ [လင့်ခ်သေ]
↑ NBC Evening News for Tuesday, Oct 11, 1983။ 2006-11-10 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Photograph showing the burning oil tanks, Un comando de la CIA y fuerzas especiales SEAL bombardean refineria en Corinto, Nicaragua, 1983. (2004-04-07)။
↑ "US Policy: Economic Embargo: The War Goes On"၊ Envío၊ Central American University – UCA။ 2007-08-21 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Rempe, Dennis M. (Winter 1995). "Guerrillas, Bandits, and Independent Republics: US Counter-insurgency Efforts in Colombia 1959–1965". Small Wars and Insurgencies6(3): 304–327. doi:10.1080/09592319508423115.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်_အစိုးရကအားပေးအားမြှောက်ပြုသော_အကြမ်းဖက်မှု&oldid=701395" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၅ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၃:၁၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။